Mpanjono: nahazo tohana amin’ny IEM ny ao Ankify | NewsMada
Mpanjono: nahazo tohana amin’ny IEM ny ao Ankify
Nahazo harato ny fikambanan’ny mpanjono madinika ao Ankify ao Ambohimena, distrikan’Ambanja. Mbola niampy kojakoja sy fitaovana toy ny siny plastika sy koveta koa izany ho an’ireo fikambanam-behivavy. Notanterahina, omaly tany an-toerana, ny fanolorana izany tamin’ny alalan’ny solontenan’ny IEM foibe Antananarivo. “Porofo izao fa fandaharanasa mirindra sady maty paika ary mamaha ny olan’ny vahoaka madinika avy hatrany ny IEM. Efa tena ao anatin’ny fiainana mafy ny vahoaka amin’izao fotoana izao. Sambany no nisy olona nitsinjo ny mpanjono madinika aty aminay”, hoy ny solontenan’ireo mpanjono nandray izany, i Abdoul Kinga.
Nambaran’ny iraka avy amin’ny mpanorina ny IEM, Razakazafy Jean Marc, kosa fa niainga avy amin’ny tatitra voarain’ny kandidà Rajoelina izao hetsika fidinana ifotony izao satria tena ilaina maika entina hanatsarana ny fari-piainan’ny mpanjono madinika ao Ambanja izany. “Nanapa-kevitra avy hatrany nandefa izany ho an’ireo vahoaka mivelona amin’ny jono aty an-toerana izy”, hoy ny avy amin’ny IEM.
Tsiahivina fa efa nahazo tohana tahaka izao koa ny mpanjono madinika any Mahajanga. “Zava-dehibe ho anay izao fihetsiky ny mpanorina ny IEM, izao satria manala ny fahasahirananay. Harato miisa 2 160 isa ny natolotra anay mpanarato madinika monina eto amin’ny “Petite Plage “ Amborovy. Fangatahanay ny hitohizan’ny fijerena ny vahoaka madinika tahaka izao”, hoy i Pierrot mpanarato. Nitarika ny fanolorana izany ny mpandrindra ny IEM, Rasamison Charles. Nahazo tombony amin’izany ny fikambanana mpanjono miisa 14 ahitana mpikambana miisa 2042 ary mampiasa lakana 720. « Fanomezan-tanana ho fanalana ny fahasahiranana amin’ny fividianana sy fanofana harato ataonareo ny anton’izao hetsika fizarana harato maimaimpoana izao ary avy amin’ny filoha Rajoelina”, hoy ny mpandrindra ny IEM any an-toerana.
Minisitry ny Fitsarana: “Miandry ny ho tohin’ny Raharaha Apollo 21 isika” 21/09/2021
Depiote Jean-Michel : “Tsy mazava ireo mpifindra monina” 21/09/2021